Frank Lampard oo go’aamiyay xaallada Hakim Ziyech kahor kulanka Southampton – Gool FM
Frank Lampard oo go’aamiyay xaallada Hakim Ziyech kahor kulanka Southampton
(London) 16 Okt 2020. Tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa go’aamiyay xaalada Hakim Ziyech kahor kulanka Southampton ay ku baddi ciyaari doonaan horyaalka Premier League.
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa barri oo Sabti ah ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Stamford Bridge naadiga Southampton, si ay u wada ciyaaraan ciyaar qeyb ka ah kulamada Isbuuca shanaad horyaalka Premier League ee kal ciyaareedkan 2020/21.
Haddaba Frank Lampard ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka bari ee Southampton, wuxuu ku sheegay:
“Edouard Mendy ma ahan mid la heli karo, Thiago Silva safarka kaddib kuma jiro liiska, Ben Chilwell ayaa ku jira liiska kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawaciisii ​​hore”.
“Hakim Ziyech wuu joogaa, laakiin isagu uma qalmo inuu ciyaarta ku soo bilowdo, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu daqiiqado helo”.
In goolhaaye goolhaayaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga uu ku soo bilaaban doono kulankan iyo inkale maadaama uu Edouard Mendy dhaawac ku maqan yahay ayaa wuxuu yiri tababare Lampard:
“Aniga ayaa go’aankaan qaadan doonaa berry”.
Tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay:
“Waxaa na horyaalla howlo badan, waxaa jira kooxo muujiyay inta ay qaadanayso in loo beddelo koox heer sare ah, waxaan ku jirnaa bilowgii safarkayaga. Shaqadu way bilaabatay, laakiin way sii socotaa”.
Tababare Solskjær oo si adag ugu jawaabay rabitaanka Paul Pogba ee u dhaqaaqista Real Madrid